Nkọwa: Huawei P40 Pro VS Huawei P30 Pro Ọ bara uru? | Akụkọ akụrụngwa
Nkọwa: Huawei P40 Pro VS Huawei P30 Pro Ọ bara uru?
N'ikwekọ na nhọpụta ya kwa afọ, ụlọ ọrụ Eshia amalitela ọhụụ Huawei P40 ọhụrụ, ebe a ka anyị mere unboxing na echiche mbụ anyị banyere Huawei P40 Pro ọhụrụ ma ugbu a, anyị ga-eche ya ihu na ụdị nke gara aga lee lee otu isi kwesiri ekwesi. Anyị ewerewo Huawei P40 Pro ọhụrụ na Huawei P30 Pro gara aga wee tinye ha ihu na ihu iji hụ ma ọ bara uru mgbanwe ahụ, You chọrọ ịma ma Huawei P40 Pro bụ ezigbo nhọrọ ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ? Echefula ntụle ikpeazụ anyị.
1 Design: Mkpaghari ihe dị mkpa mana ọ bụ isi
3 Igwe foto: Isi ihe dịbu
4 Multimedia na Njikọta ngalaba
5 Autonomy, ebe Huawei na-enwu
Design: Mkpaghari ihe dị mkpa mana ọ bụ isi
E wuru ha abụọ na ntọala ọla na-egbu maramara nke etinyere na iko n'azụ na n'ihu, agbanyeghịo Huawei emeela obere tweaks na imewe nke na-eme ka o kwe omume na, na-enweghị isi ihe P Pụtara, anyị na-ahụ ọdịiche pụtara ìhè dika enwere ike ichota otu ihe omuma site na ozo, otu kacha nta. Ma nke a bụ otú ngwaọrụ abụọ ahụ si yie ma dị iche iche n'otu oge ahụ, n'eziokwu, Huawei P40 Pro ọhụrụ enwetawo ọkara milimita na gram iri jiri ya tụnyere mbipute gara aga:
Huawei P40 Pro: 158,2 * 72,6 * 8,95mm maka gram 203
Huawei P30 Pro: 158 * 73,4 * 8,4mm maka gram 192
N'ụzọ nke a isi ihe dị iche iche na nhazi nke anyị na-ahụ sitere na obere uto nke ogwe ihu nke na-enwetakwa curvatures na akụkụ nke elu na nke ala, ọ bụghị naanị n'akụkụ dị ka ọ dị na mbụ; Dropdị ụdị "notch" na - esote ya na igwefoto abụọ (foto + IR) na akuku aka ekpe nke ihuenyo ahụ; The n'azụ modul, n'agbanyeghị inwe otu ebumnobi, bụ ugbu a ọzọ pụtara ìhè na ibu; N’ikpeazụ, anyị na-ahapụ ọnụ ụlọ dị larịị ihu na okpokoro nke na-ekwecha akụkụ ya niile.
Na nke a, anyị nwere ike ikwu na P30 Pro na P40 Pro dị oke yiri ya, yabụ ngwaọrụ abụọ na-arịgo usoro nhazi nke ụlọ ọrụ China, Kirin 990 nke pụtara irè na arụmọrụ. Maka akụkụ ha, ngwaọrụ abụọ ahụ nwekwara 8GB nke Ram na mbụ uncheck dị na - 256 GB nke ebe nchekwa maka Huawei P40 Pro, Mgbe P30 Pro malitere site na 128GB, ee, ngwaọrụ abụọ a nwere nchekwa nchekwa Site na kaadị nke Huawei, anyị ga-edozi njedebe na nke a.
Ọ bụ ya mere na ngwaọrụ abụọ ahụ, dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo ahụ, anyị achọpụtala arụmọrụ yiri ya. Nke a bụ nnukwu otuto nye P30 Pro, bụ nke nweburu ngwaọrụ tupu oge ya. Ọ na-achọ ịmata ihe n'aka nke ọzọ n'agbanyeghị agbanyeghị mkpebi dị elu na ọnụego ume elu elu, P40 Pro ka na-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa (ihe atụ na vidiyo) karịa Huawei P30 Pro, yabụ sọftụwia ahụ na ụfọdụ mmezigharị teknụzụ ga-adị n'ime. Otú ọ dị, ngwaọrụ abụọ nwere ọtụtụ ike.
Igwe foto: Isi ihe dịbu
Dị ka o mere n'oge ya na Huawei P30 Pro, P40 Pro ọhụrụ a chọrọ ịtọ ntọala na foto ekwentị mkpanaaka, esemokwu dị iche iche na-emetụta n'ụzọ ọ bụla, na nke ahụ bụ na otu afọ na-aga ogologo ụzọ na mmepe foto, yana otu esi eme ya mere N'oge ahụ, Huawei P40 Pro a bụ onye isi na ngalaba a. N'ezie, ha abụọ nwere ihe mmetụta anọ nwere otu njirimara mana ogo dị iche iche.
Huawei P40 Pro: MPkpụrụ 50MP - 40MP Ultra Wide Angle - 8MP 5x Telephoto Lens - OIS + AIS + ToF Sensor
Huawei P30 Pro: MPkpụrụ 40MP - 20MP Ultra Wide Angle - 8MP 5x Telephoto Lens - OIS + ToF Sensor
Maka akụkụ ha, ngwaọrụ abụọ ahụ nwere igwefoto selfie 32MP, Ọ bụ ezie na akuku akụrụngwa nke igwefoto n'ihu nke Huawei P40 Pro na-ebuwanye ibu. N'agbanyeghị na ọ nwere ike, anyị na-achọta nkọwa karịa na foto niile nke Huawei P40 Pro, ebe ndị agha ahụ dịtụ obere nọ na lens telephoto dị egwu nke ngwaọrụ abụọ ahụ, n'agbanyeghị na anyị nwetara mmụba karịa na ngwakọ ngwakọ nke P40 Pro. N'okpuru ebe a, enwere foto ndị a na Huawei P30 Pro:
Na ngwaọrụ abụọ, dịka ị hụworo na gallery ahụ, anyị nwere arụmọrụ dị egwu, agbanyeghị, Huawei P40 Pro na-egwuri egwu na "njikọ ọzọ" gbasara ngwaọrụ niile dị n'ahịa. Banyere ndekọ ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ mmelite na nkwụsi ike na gbaa na nyocha vidiyo anyị dị n'elu.
Multimedia na Njikọta ngalaba
Ihuenyo bụ ihe ọzọ na-ekpebi akụkụ, OLED nke Huawei P40 Pro etobeghị naanị na obere, ma natara ndị na-esonụ ogo nke mkpebi Ọzọkwa, anyị na-ahụ a 90Hz nweta ume nke, na-enweghị ịbụ otu n'ime ndị kachasị elu na ahịa, na-enye arụmọrụ ka elu karịa P30 Pro. N'ihe banyere ụda, ma na stereo nke nwere okwu okwu dị elu zoro n'azụ ihuenyo ahụ, P40 Pro enwetawo ike na nghọta. .
Huawei P40 Pro: OLED 6,58 - QHD + mkpebi na 90Hz
Huawei P30 Pro: OLED 6,47 - FHD + mkpebi na 60Hz
Banyere njikọta, nnukwu ọdịiche ọzọ. Ọhụrụ nkwukọrịta mgbawa ndokwasa Huawei P40 Pro abụghị naanị na-ewetara anyị njikọta 5G zuru oke, mana ya na ụdị WiFi 6 ọhụrụ ahụ Ọ na-enye arụmọrụ ugboro atọ dịka nkwụsi ike na ngwa ngwa dị ka obere nwanne ya nwoke bụ P30 Pro, dịka ị hụworo na vidiyo ntanye.
Autonomy, ebe Huawei na-enwu
N'oge ahụ, Huawei P30 Pro bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị nwere arụmọrụ kachasị mma n'ime oke njedebe ọ nwere ike ịnye n'ihe gbasara nnwere onwe. Otú ọ dị, Huawei P40 Pro a na-eketa àgwà niile nke onye gara aga: 4.200 mAh na 40W ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ gụnyere na ngwaahịa ahụ, yana ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe ikuku na-agbanwe agbanwe. Nke a kwesịrị igosi na P40 Pro ga-enye nnwere onwe dị ala, anyị nwere 5G, WiFi ka mma, mkpebi ọzọ, nwekwuo ume ọhụrụ ... gịnị kpatara ya?
Na nyocha nke ikpeazu ha nwere arụmọrụ yiri nke a, Huawei P30 Pro na-enweta ihe dị ka minit 35 karịa na P40 Pro, Kedu nke na-adị obere ka anyị tụlee nkọwa ndị ahụ edepụtara na mbụ, ya mere, Huawei P40 Pro na-aga n'ihu ịtọ ntọala nke usoro nnwere onwe.
Isi okwu ebe a bụ sọftụwia ahụ, Anyị na-echeta na Huawei P30 Pro bụ otu n'ime ngwaọrụ ikpeazụ ka nwere Ọrụ Google, ọ bụghị P40 Pro nke nwere Ọrụ Huawei, ihe ị kwesịrị iburu n'uche.
Zụta Huawei P30 Pro site na euro 631.
Zụrụ Huawei P40 Pro na onyinye site na 1099 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nkọwa: Huawei P40 Pro VS Huawei P30 Pro Ọ bara uru?
Apụta na Netflix, Disney + na HBO maka ọnwa Eprel
Sistemụ nchekwa igwe ojii kachasị mma